Hanohana an'i Amazon's Alexa | .Ny Xiaomi Mi Band 5 Androidsis
Xiaomi dia nanjakazaka tamin'ny tsenan'ny fikajiana fehin-tànana nandritra ny taona vitsivitsy, manokana kokoa hatramin'ny nanombohany ny fanontana voalohany an'ny Mi Band, na dia tamin'ny fotoana nanombohan'ny Mi Band 2 aza, rehefa nanjary référence erak'izao tontolo izao raha ny habetsahan'ny hetsika ataontsika isan'andro.
Miaraka amin'ny Mi Band dia azontsika atao ny manisa ny dingana rehetra ataontsika mandritra ny andro, ny halaviran-dàlana, ny fitepon'ny fony, ny tsirin'ny nofinofy ... fa raha mitady fitaovana iray isika manisa isa ny hetsika ara-batana manokana, tsy ny Mi Band no tadiavinao. Na dia mety ho rehefa navotsotra aza ny Mi Band 5.
Ny Mi Band 5 dia hampiditra fiasa momba ny Fampahafantarana Manokana, asa izay hikarakara fantaro ho azy ny karazana fampihetseham-batana ataontsika ny fisoratana anarana izany amin'ny finday. Ity fiasa ity dia misy amin'ny ankamaroan'ny smartwatches izay hitantsika amin'izao fotoana izao eny an-tsena na amin'ny Samsung na Huawei.
Betsaka ny tsaho momba ny maodely Mi Band manaraka. Ny maodely manaraka hitsena ny tsena dia ny laharana 5, fehin-tànana izay, raha tsy raharahantsika ny tsaho farany dia mety manolotra fanampiana ho an'i Alexa, Mpanampy virtoaly Amazon. Amin'ny alàlan'ny fampidirana amin'ny Alexa, dia ahafahan'ny mpampiasa mampiasa fitaovana marani-tsaina Alexa mifanentana amin'ny tànany manokana amin'ny alàlan'ny baikon'ny feo.
Vaovao hafa izay hampiditra, raha ny tsiliantsofina farany, dia a metatra oxygen oxygen, metatra tsingerin'ny fadimbolana sy NFC, na dia mbola tsy tena mazava aza ity farany. Ny Mi Band 4 dia mampifangaro puce NFC saingy any Shina ihany no ampiasaina. Ny taranaka fahadimy an'ny Mi Band 5 dia afaka nanao ny dingana farany a chip NFC manerantany, azo ampiasaina eran'izao tontolo izao.
Ny fanombohana tsena ny taranaka faha-dimy Mi Band dia kasaina hatao ny aogositra amin'ny kinova manerantany, ny kinova izay ho hita manerantany ary izay no tena mahaliana antsika.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Hanohana an'i Amazon's Alexa ny Xiaomi Mi Band 5
Ahoana ny fanamafisana ny feo manodidina amin'ny smartphone
WhatsApp dia efa mamela anao manampy fifandraisana amin'ny kaody QR ao amin'ny kinova beta an'ny Android